चैतपछि रू. ५ करोड ६४ लाखको अक्सिजन आयात « Sajhapath.com
काठमाडौं,भदौ १८ । कोभिडको संक्रमण बढ्दै गएपछि गतवर्ष चैतयता ५ महीनाको अवधिमा मात्रै रू. ५ करोड ६४ लाखको अक्सिजन आयात भएको छ । चैतपछि नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर देखिएको थियो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार त्यसयता अक्सिजनको आयात बढेको देखिन्छ । तर, अहिले माग घट्दै गएपछि केही प्लान्ट भने बन्द भएका छन् ।
कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएयता नेपालमा २६ ओटा उद्योगले अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएका थिए । अहिले कोरोना संक्रमण घट्दै जाँदा बजार नपाएपछि पाँचओटा प्लान्ट बन्द भएको जानकारी उनले दिए । ‘अहिले संक्रमण कम भएकाले अन्य देशले निर्यात गरिरहेका छन्, तर संक्रमण बढ्यो भने उनीहरूले निर्यात गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारकै कारण अहिले स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुन थालेका छन् । पछि संक्रमण बढ्दा के गर्ने भन्ने सरकारले सोचेको देखिँदैन ।’ आर्थिक अभियानबाट